Evernote 9.2.6 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 9.2.6 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း Evernote
Evernote ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Evernote helps you focus on what matters most and have access to your information when you need it. Input typed notes or scan handwritten notes. Add to-do’s, photos, images, web pages, or audio ... and it’s all instantly searchable. Create notebooks, organizers, planners. Organize notes any way you want and share with anyone. And Evernote syncs your notes and notebooks across your devices so your information is always with you, everywhere you go.
• Keep journals, documenting the news, events and milestones of your daily life
• Take notes and create notebooks inavariety of formats, including: text, sketches, photos, audio, video, PDFs, web clippings and more
• Create separate notebooks to organize your memos, receipts, bills and invoices
• Share your notes, notebooks, memos, journals, planner, organizer with your friends, colleagues or family
• Make personal to do lists to keep your thoughts organized
• Use it asaplanner to organize your life
• Create notebooks, write notes, memos and journals on the go with the easy-to-use notepad
• Create agendas and planners, write notes, memos, journals and craft presentations. Use it as your ultimate planner and organizer at work
• Annotate documents with comments and notes during team meetings, then share with colleagues
• Create different notebooks and planners for each class and keep everything organized
• Keep track of your upcoming exams, assignments and deadlines in your planner.
Evernote သငျသညျအမြားဆုံးအရေးပါအရာပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်သင်ကလိုအပ်သည့်အခါသင့်အချက်အလက်များကိုသုံးခွင့်ရှိသည်ကူညီပေးသည်။ input မှတ်စုသို့မဟုတ်စကင်ကိုလက်ရေးမှတ်စုရိုက်နှိပ်။ To-do ရဲ့, ဓာတ်ပုံများ, ပုံများ, ဝဘ်စာမျက်နှာများ, သို့မဟုတ်အသံ Add ... ဒါကြောင့်အားလုံးချက်ချင်းရှာဖွေပါတယ်။ မှတ်စုစာအုပ်, စီစဉ်, စီစဉ်ဖန်တီးပါ။ မှတ်စုငျလိုခငျြသညျ့နညျးလမျး Organize နှင့်မည်သူမဆိုအတူမျှဝေ။ သင်၏အချက်အလက်များကိုသင်နှင့်အတူအစဉ်မပြတ်ဖြစ်ပြီးသို့မှသာသင်ဘယ်နေရာသွားသွားနှင့် Evernote, သင့် devices တွေကိုဖြတ်ပြီးသင့်ရဲ့မှတ်စုများနဲ့မှတ်စုစာအုပ်ထပ်တူပြုပြီး။
The New York Times - "က On-Evernote ရဲ့ကန့်ထားတဲ့ device ကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်မမေးမနေပါနဲ့ ... သင်ကအရာအားလုံးထားရာအရပ်အဖြစ် Evernote ကိုသုံးပါ"
"ဒါဟာမှတ်စုအပေါငျးတို့သထုံးစံတာနှင့်ပြုသောအမှုအလုပ်လာပြီမှကြွလာသောအခါ, Evernote တစ်ခုမရှိမဖြစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ " - ကို PC Mag
Evernote အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Evernote အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Evernote အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
anruan စတိုး 741 327.09k
Evernote ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Evernote အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 9.2.6
ထုတ်လုပ်သူ Evernote Corporation
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://evernote.com/privacy/
File Size: 45.66MB
Release date: 2018-12-24 20:39:23
လက်မှတ် SHA1: 0B:47:D8:D2:1D:8A:24:A2:A4:0C:41:59:E8:A5:D4:D6:B0:27:AF:25
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Evernote Mobile Products
အဖွဲ့အစည်း (O): Evernote Corporation
Evernote APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ